🥇 ▷ Sida loo qoro fariimaha WhatsApp si geesinimo ah, farqi ah ama hoosta looga xariiqay ✅
Sida loo qoro fariimaha WhatsApp si geesinimo ah, farqi ah ama hoosta looga xariiqay
Maaddaama aan toosno illaa aan sariirta seexanno, maalin kasta ayaan u isticmaalnaa, si joogto ah, oo durba wey adag tahay in la qiyaaso adduunka la’aanteed. WhatsApp waa mid ka mid ah barnaamijyadaas ka gudbay caqabadaha codsiyada keliya iyo si la mid ah waxyaabaha kale ee dhaqanka elektiroonigga ah sida emojis, meel ayey bulshada ka dhex dhacday, maalinba maalinta ka dambaysa. Iyo sida barnaamij kasta oo fara badan, WhatsApp waxay qarisaa daraasiin howlo aan la garaneyn, tabaha yaryar ee khibrada u fududeeya iyo / ama kala duwanaan marka la isticmaalayo.
Beddel qaabka qoraalka ee farriinta
Ereyga, Bogagga iyo erey-khariyeyaasha kale ee ereyga waxaan u isticmaalnay inaan ku badalno qaabka qoraalka oo leh hal badhan. Sidan ayaan ballan uga dhigi karnaa faallooyinka, hoosta ka xariiqi kartaa ama si gaar ah u muujin kartaa magac gaar ah oo dhiiran. Iyo isla wixii aad ku sameyn karto WhatsApp-ka, maadaama dhowr sano ka hor uu farriinta taleefanku u adeegsaneysaa isbeddelo qaabka qoraalka ah ee u dhexeeya howlaheeda.
Xaqiiqdii waxay ku siinaysaa laba ikhtiyaar, ama waqtiga dhabta ah inta aad qoreyso fariintaadaama goorta aad sidaas sameysay iyo wax yar ka hor intaadan dirin. Labada dariiqo si isku mid ah ayey u fududahay, taas oo keliya ayaa kaaga baahan inaad xasuusato inaad dhigto laba astaamood, iyo tan kale inaad dhowr jeer shaashadda riixdo.
Beddel qoraalka inta aad qoraysid
Si aad qoraal ugu qorto farrinta, dhig astaamaha qoraalka kahor iyo kadib.
Si aad ugu qorto qoraalka si geesinimo leh, astaan ​​astaan ​​ah ka hor iyo ka dib qoraalka.
* qoraalka *
Si aad u qorto qoraalka falsafadeed, dhig calaamad baar ka hor iyo ka dib qoraalka.
~ qoraalka ~
Si aad ugu qorto qoraalka monospace, dhig seddex xigasho xigasho kahor iyo kadib qoraalka.
Beddel qoraalka kadib qorista
Gudaha Android waad awoodaa riix oo hayso qoraalka Maxaad qoreysaa > Inbadan> oo xulo Bold, Italic, iskutallaab ama Monospaced.
IPhone-ka, waad awoodaa riix oo hayso qoraalka Maxaad qoreysaa > BIU> Y xulo Furuq, Cilad ama Gudub